တချို့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘလော့ဂ် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးဆက်အနေနှင့်လေကြောင်းခရီးစဉ်သည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ လှိုင်းလေထန်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာချွတ်ယူဖို့ပိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်.
ပြီးတော့ဒါကိုလုပ်ချင်ရင် ဒီထက်အလေးချိန်နှင့်အတူသွားရလိမ့်မယ်; မဟုတ်ရင်လေယာဉ်ကနောက်ကျရမယ်၊ ဖျက်သိမ်းရမယ်။ အဘယ်ကြောင့်?
လေသည်အပူလာသည်နှင့်အမျှပျံ့နှံ့သွားပြီးယင်း၏သိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါးသောကြောင့်လေယာဉ်သည်လေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်လျှောက်ပြေးသောအခါအတောင်များသည်ဓာတ်လှေကားလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်လေယာဉ်ပုံစံနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း၏အရှည်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တင်ဆောင်ထားသောလေယာဉ်များ၏ ၁၀ မှ ၃၀% အကြားကွာဝေးနိုင်သည် အပူချိန်အရမ်းမြင့်မားသည်ဆိုပါက။
လေ့လာမှုတွင် ဦး ဆောင်ရေးသားသူ Ethan Coffel မှကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Ph.D ဘွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ လေကြောင်းလိုင်းများအတွက်အသေးအဖွဲကုန်ကျစရိတ်နှင့်လေကြောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ်သက်ရောက်မှု လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် "။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအပူချိန်အထိမြင့်တက်နိုင်သည် ၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ ၂၁၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဖြစ်သည်သို့သော်ဤအတောအတွင်း, အပူလှိုင်းများပိုမိုမကြာခဏဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးသည် ၄ ​​မှ ၈ ဒီဂရီအထိမြင့်တက်ပြီး ၂၀၈၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ ဤအပူလှိုင်းများသည်အပူနှင့်ဆက်နွှယ်သောကမ္ဘာတွင်ပြproblemsနာများအများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကိုမလျှော့ချပါက၊ အပူဆုံးနေ့များတွင်လောင်စာဆီပမာဏနှင့် payload အလေးများကို ၄% အထိလျှော့ချရန်လိုအပ်သည် တချို့လေယာဉ်ပေါ်မှာ။ လေ့လာမှုအရ ၄ င်းတို့ကိုအနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချလိုက်လျှင်မကြာမီအလေးချိန် ၀.၅% သာလျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်ဟုလေ့လာမှုကဆိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » မြင့်တက်သောအပူချိန်များသည်လေကြောင်းလိုင်းများ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုကန့်သတ်လိမ့်မည်